Budata City theft simulator APK maka Android
Budata City theft simulator
Budata City theft simulator,
Simulator ohi obodo bụ egwuregwu mkpanaka dị ka GTA nke ị nwere ike ịnụ ụtọ igwu egwu ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji oge egwuregwu gị jupụta negwuregwu.
Anyị na-agbalị iwu alaeze mpụ nke anyị na simulator City, egwuregwu emebere emebere ụwa nke ị nwere ike ibudata ma kpọọ na ekwentị gị na mbadamba gị site na iji sistemụ arụmọrụ gam akporo. Maka nke a, ọ dị anyị mkpa ime oke ohi, zobata ụgbọ ala ndị okomoko ka ndị uwe ojii ghara ijide anyị mgbe anyị na -eme ihe a niile.
Ndị uwe ojii abụghị naanị ndị iro anyị na simulator ohi obodo. Nime egwuregwu ahụ, anyị ga -ezute ndị otu mafia, ndị omempụ na ndị otu, anyị ga -atụgharị egbe anyị ka ọ bụrụ ọdọ mgbọ. Anyị nwere ọtụtụ ngwa ọgụ dị iche iche ịhọrọ nime egwuregwu. Na mgbakwunye na ngwa ọgụ ọkọlọtọ dịka egbe, egbe egbe na egbe, anyị nwere ike iji ngwa ọgụ dị egwu dịka ogbunigwe roket.
Ị nwere ike iji ụgbọ ala, ụgbọ ala ụkwụ anọ na injin na simulator ohi obodo. Nchụpụ ndị uwe ojii na -atọ ụtọ na ọgụ na -ekpo ọkụ na -echere gị na simulator ohi obodo. Ọ dị mma ịmara na egwuregwu a enweghị ezigbo eserese.
City theft simulator Ụdịdị
Mmepụta: Good Thoughts Affect